नयाँ शक्ति र फोरममा असमझदारी ! - inaruwaonline.com
नयाँ शक्ति र फोरममा असमझदारी !
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ ०५, २०७४ समय: ३:१३:३५
काठमाडौं, ५ असार । उम्मेदवारी दर्तामा आफ्नै चुनाव चिन्ह गुम्ने स्थिति आएपछि संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार तनावमा छन् । देशभर एउटै चुनाव चिन्ह मसाल लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका फोरम र नयाँ शक्तिबीच असमझदारी हुँदा बाँकेमा समसया आएको हो ।
फोरमले नेपालगन्ज उपमहागरपालिका मेयरमा कमरुद्धिन राइलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनीभन्दा पहिल्यै नयाँ शक्ति पार्टीकी जगतकुमारी खड्काले मेयर र ममता बानियाले उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि फोरमका नेता, कार्यकर्ता दिनभर तनावमा रहे ।
संघीय फोरम बाँकेका प्रवक्ता सम्सुल हक रार्इले नयाँ शक्ति पार्टीले धोका दिएर उम्मेद्वारी दर्ता गराएको अारोप लगाए । उनले भने, ‘चुनाव चिह्नका लागि निर्वाचन अायोगमा उजुरी गरिसकेका छाैं ।’अाजको कान्तिपुरमा खबर छ।